बाइबलका कथाहरू: पृथ्वीमा राक्षसहरू - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
शैतान भन्ने खराब स्वर्गदूतले नराम्रो काम मात्र गरिरहन्थ्यो भनेर के तिमीले सम्झेका छौ? त्यसले परमेश्वरका अरू स्वर्गदूतलाई पनि नराम्रो बनाउन खोज्यो। केही समयपछि कुनै-कुनै स्वर्गदूतले शैतानको कुरा सुन्न थाल्यो। त्यसपछि परमेश्वरले स्वर्गमा दिनुभएको काम छाडेर उनीहरू तल पृथ्वीमा आए। उनीहरूले आफ्नो जीउ मान्छेको जस्तै बनाए। किन, तिमीलाई थाह छ?
बाइबलले परमेश्वरका यी छोराहरूले पृथ्वीमा राम्री-राम्री केटीहरू देखेपछि उनीहरूसितै बस्न मन गरे भन्छ। पृथ्वीमा आएर स्वर्गदूतहरूले ती केटीहरूसित बिहे गरे। बाइबलले यसो गर्नु गलत थियो भन्छ। किनभने परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई स्वर्गमा बस्न बनाउनुभएको थियो।
स्वर्गदूत र उनीहरूका पत्नीहरूले जन्माएका बच्चाहरू मान्छेका बच्चाभन्दा बेग्लै थिए। सुरु-सुरुमा त उनीहरू हेर्नमा त्यति फरक थिएनन्। तर उनीहरू झन्‌झन् ठूलो, झन्‌झन् ठूलो, झन्‌झन् बलियो हुँदै गए अनि अन्तमा राक्षस बने।
हनोक त मरिसकेको थियो। तर पृथ्वीमा अझ एक जना असल मान्छे बाँकी नै थियो। उसको नाउँ नूह थियो। नूह सधैं परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गर्थ्यो।
एकदिन परमेश्वरले नूहलाई सबै खराब मान्छेलाई नाश पार्ने समय आइसक्यो भन्नुभयो। तर नूह, उसको परिवार अनि थुप्रै जनावरलाई चाहिं परमेश्वरले बचाउनुभयो। परमेश्वरले यो कसरी गर्नुभयो, हामी अर्को कथा पढौ है त।
परमेश्वरका कुनै-कुनै स्वर्गदूतहरूले शैतानको कुरा सुन्न थालेपछि के भयो?
स्वर्गमा आफ्नो काम छाडेर कुनै-कुनै स्वर्गदूतहरू किन तल पृथ्वीमा आए?
स्वर्गदूतहरू तल पृथ्वीमा आएर मान्छेजस्तै बन्नु किन गलत थियो?
स्वर्गदूतका बच्चाहरू कसरी फरक थिए?
स्वर्गदूतका बच्चाहरू ठूलो भएर राक्षस बनेपछि के गरे, चित्र हेरेर बताऊ।
हनोकपछिको असल मान्छेको नाउँ के थियो र परमेश्वरले उसलाई किन मन पराउनुहुन्थ्यो?
उत्पत्ति ६:१-८ पढ्नुहोस्।
हाम्रो आचरणले यहोवालाई ठेस पुऱ्याउन सक्छ भनेर उत्पत्ति ६:६ ले कसरी देखाउँछ? (भज. ७८:४०, ४१; हितो. २७:११)
यहूदा ६ पढ्नुहोस्।
नूहको दिनका “आफ्नो मर्यादामा नरहने” स्वर्गदूतहरू आज हाम्रो लागि कसरी चेतावनी हुन्? (१ कोरि. ३:५-९; २ पत्रु. २::४, ९, १०)